Dargaggoonni Biyyoota Afrikaa Gara Kuma Tokkoo Waashingten Keessatti Prezidaant Obaamaa Waliin Mari’atan
Hagayya 04, 2016
Hirmaattota Leenjii 'YALI'
As Yunaaytid Isteets keessatti, dargaggoota biyyoota Afrikaa adda addaa irraa dhufanii torban leenjii hoogganummaa fudhataa turan waliin kan marii geggeessan – Prezidaantiin Yunaayitid Isteets – Baaraak Obaamaa, “Ardittii abdii ifaa qabdu – Afrikaaf qoodni dargaggoonni qaban guddaa dha” - jedhan.
Kaleessa as Waashington DC keessatti, kanneen Sagantaa leenjii hoogganummaa “Mandela Washington Leadership Initiative” - jedhamuuf biyyoota Afrikaa adda addaa irraa dhufan – dargaggota gara kuma tokkootti dhihaatan waliin marii bal’aa geggeessan – Prezidaant Obaamaan. Yeroo prezidaantichi gara galmaa seenanitti, dargaggoonni galmicha guutanii hawwii guddaan eeggataa turan --- harka dha’uudhaan, prezidaanticha guyyaa dhalata isaanii – waggaa 55ffaa ayyaaneffataa turaniin “Ayyaana Dhalataa Gaarii!” jedhanii simatan.
Dagaggoonni Afrikaa sun, uffata aadaa isaanii uffatanii, tokko tokko immoo – alaabaalee biyya biyya isaanii hafarsuudhaan ture ka prezidaanticha simatan.
Sagantaa bara kanaa irratti – dargaggoota Itiyoophiyaa 51 tokko qooda fudhate. Mana-barnootaa Addis Katama, ka Finfinnee jirutti, gorsa kennuun ka tajaajilu, namni hir’ina dhageettii qabu Seyifuu Yilmaa karaa turjumaanotaa Afaan-mallattoo hiikanii gaaffii dhiheessee jira.